Games – Category – Windows – Vessoft
Games Ayna System Tool si loo hagaajiyo waxqabadka nidaamka iyo tayadoodii gameplay ah. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay fuliyaan ayna ku hab toos ah ama buuga.
Games Ayna System Tool in ay kordhiyaan xawaaraha gudbinta xogta dhexeeya your computer iyo server ciyaarta. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u hagaajiyaan xawaaraha la xidhiidha in kulan oo caan ah oo kala duwan ah.
Games Qabashada Screen Software functional in ay qabsadaan video ka shaashadda kombuyuutarka aad. Software waxaa ka mid ah algorithms gaar ah in laga hortago saamaynta ay ku xawaaraha codsiyada inta ay rikoor.
Games Network Internet Caan ah oo ka mid ah ayaa isagana ka emulator ee shabakadda deegaanka. Software wuxuu hubinayaa xiriir aamin ah ciyaartoyda kale oo uu leeyahay qalab badan oo Iyada.
Games Waxbarashada Software si ay u sameeyaan iyo xalinta cryptographs ah. Software waxa ka mid ah qalab badan si ay u abuuraan noocyada kala duwan ee cryptographs.